Ifulethi Eliphezu Kophahla le-THANASIS edolobheni lase-Kos - I-Airbnb
Ifulethi Eliphezu Kophahla le-THANASIS edolobheni lase-Kos
Kos, Dodecanese, i-Greece
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Athanasios
U-Athanasios Ungumbungazi ovelele
Leli yindlu ebukekayo esitezi sesi-3, entsha ngokuphelele, eyakhiwa ngoJanuwari 2017.
Ingamukela abantu abangafika kwabangu-3, ngakho ilungele umbhangqwana onengane noma abangani abangu-3.
Ifulethi linekamelo lokulala, ukugeza okukodwa, nekhishi elihlome ngokuphelele kanye negumbi lokuphumula. I-elevator ingakuthatha ikuyise esitezi sesi-2.
Indawo enhle kakhulu: amaminithi angu-5 nje ngezinyawo ukusuka esigcawini esimaphakathi nedolobha lase-Kos, amaminithi angu-10 ukusuka echwebeni kanye nemizuzu engu-3-4 ukuya ogwini oluseduze ("Aktaion") olunokubukwa kokubili kolwandle nentaba.
Ifulethi libalele futhi lingenisa umoya wemvelo, futhi linikeza ukufinyelela kuthala elincane eliphezu kophahla. Indawo enhle yokuqala nesiphetho esikhululekile sosuku lwakho lokuhlola izintelezi ezifihliwe zedolobha lase-Kos kanye namabhishi amahle esiqhingini namasayithi.
Ifulethi elingaphakathi liyindawo yokuhlala ethule esetshenziswa imakethe yasendaweni, indawo yokubhaka, imakethe yezithelo namakhefi. Eduze kwezindawo ezikhanga izivakashi ezinkulu zedolobha lase-Kos, ungafinyelela izindawo zokudlela eziningi ezisogwini lolwandle kanye nesikwele esikhulu ngokuhamba kwamaminithi ambalwa.
Ababungazi bazobe besocingweni ukuze bakunike okhiye futhi baphendule noma yimiphi imibuzo onayo ngesikhathi uhlala.
UAthanasios Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 00000168121